घनेन्द्र ओझा काठमाडौं, १३ असार
डा. विमल कोइराला आफैँमा परिचय हो । लामो समय सरकारी सेवामा रहेर शाखा अधिकृतदेखि सर्वोच्च प्रशासक अर्थात् मुख्यसचिवसम्म भएर अवकास भएका कोइराला कुशल शब्दशिल्पीसमेत हुन् ।
विशेषगरी कविता र गीतका क्षेत्रमा सुपरिचित कोइराला कथालेखनमा पनि सक्रिय छन् ।
जागिरे जीवनसँगको कोइरालाको साइनो अनि साहित्यसँगको सम्बन्ध उत्तिकै प्रगाढ रहेको छ ।
पढाउने (प्राध्यापन) रहर भएका कोइरालाको जीवनमा पढाउने रहरमा अवरोध भएपछि चाहना नहुँदा नहुँदै निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुपरेको दुखेसो अझै बाँकी छ, जबकि नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रको अत्युच्च तहमा पुगेर उनी अवकास भएका छन् ।
उनै डा. कोइरालाको समग्र व्यक्तित्व प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ आजको ‘व्यक्तित्व’ स्तम्भमा ।
६ वैशाख २०१२ मा मोरङको विराटनगर, कञ्चनबारीमा बुबा थीरप्रसाद र आमा छायादेवीबाट जन्मिएका हुन् विमल । त्यसबेला तराईमा औलोको प्रकोप निकै थियो । औलोको डरका कारण बाआमाले उनलाई ९ महिनाको हुँदा नै पुर्ख्यौली थलो भोजपुर लगे । उनी ४ वर्षको भएपछि मात्र उनलाई पुनः विराटनगर ल्याइयो । त्यसपछि उनको परिवार पनि स्थायी रूपमै विराटनगरमै बस्न थाल्यो ।
उनका बाआमाका ३ छोरामा उनी माहिला छोरा हुन् । उनका जेठा दाजुको निधन भइसकेको छ । साहिँला भाइ रमेश वरिष्ठ अधिवक्ता छन् भने कान्छो भाइ अमेरिकामा रहँदै आएका छन् । उनका २ बहिनी काठमाडौंमै छन् ।
विमलको बाल्यकाल विराटनगरमै बित्यो । विराटनगर, तराईको पनि भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र । थारू र मधेसीहरूको बाहुल्य । उनको बाल्यकाल पनि उनै मधेसी र थारू साथीहरूसँग बित्यो । उनका नजिकका र प्रिय साथी भनेकै उनै मधेसी र थारू समुदायका थिए ।
यसै कारण उनलाई अहिलेसम्म लाग्छ, ‘नेपाली समाज विविधतामा एकता भएको समाज हो ।’
उनलाई बाल्यकालमा लाग्थ्यो, ‘रूप, रङ, वर्ण, जात, धर्म आदि केही होइनन्, यीभन्दा माथि त साथी हो, मान्छे हो ।’
साथीहरूसँग खेलेका, झगडा गरेका अनि फेरि मिलेका यस्ता धेरै घटना उनको मानसपटलमा ताजै छन् । तर, उनले एसएलसी दिइसकुन्जेल वा क्याम्पस पढ्न नथालुन्जेल मान्छेबीच अनेक नामको विभेद छ भन्ने महसुस नै गरेनन् ।
उनी त बाल्यकालका सबै जात, वर्ण र धर्मका साथीसँग उत्तिकै निकट थिए, कुनै भेदभाव थिएन आपसमा ।
भन्छन्, ‘कलेज पढ्न थालेपछि पो फर्किएर हेरेँ आफ्नो निकट विगत, आश्चर्यमा परेँ म ।’
उनलाई हिजोसम्म लागेको कुरा गलत रहेछ । आखिर मान्छे-मान्छेबीच कति ठूलो असमानता र विभेद रहेछ !
उनी भन्छन्, ‘यदि विभेद र असमानता नहुँदो हो त ती मेरा बालसखा, जो हरेक क्षण मसँग रमाउँथे, म उनीहरूसँग रमाउँथेँ । सँगै पढ्थ्यौँ, सँगै एउटै थालमा खान्थ्यौँ, ती किन स्कुले जीवनबाट माथि उठ्न सकेनन् ?’
अत्यन्त भावुक हुँदै विमल भन्छन्, ‘यो हाम्रो समाजमा भएको आर्थिक, सामाजिक विभेदको कारण हो ।’
उनलाई आफ्ना ती बालसखाले पढ्न नपाएकामा दुःख लागेको छ । आखिर उनीहरूले आफू जसरी उच्चशिक्षा हासिल गर्न नपाउनुको कारण सामाजिक-आर्थिक नै भएको उनको बुझाइ छ ।
‘किन, कुन अपराधका कारण मेरा ती बालसखाहरूले मैले जसरी पढ्न पाएनन् ? मैलेचाहिँ के धर्म गरेको थिएँ र चाहे जसरी पढ्न पाएँ ?’, उनी भन्छन्, ‘उनीहरूलाई शिक्षा किन्न सकेनन्, मेरा बाआमाले मेरालागि शिक्षा किनिदिन सक्नुभयो, यति होइन ?’
उनी अत्यन्त भावुक र संवेदनशील बन्छन् आफ्ना बालसखालाई सम्झिएर । आफू मुलुकको उच्चप्रशासकबाट अवकास भएको तर आफ्ना ती बालसखा अझै मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेको अवस्था देख्दा उनलाई ऊबेलादेखि आजसम्मको राज्य संयन्त्रप्रति वितृष्णा जाग्छ ।
उनको बालापन निकै रमाइलो थियो । तिनै मधेसी र थारू समुदायका साथीहरूसँग माछा मारेर पोलेर खाने, लिची, आँप चोरेर खाने गरेका ती दिन सम्झिँदा निकै रोमाञ्चित बने विमल ।
‘वास्तवमै बालापन निकै सुन्दर थियो, निकै सम्झनयोग्य थियो’, विमल भन्छन्, ‘म ती सबै मेरा बालसखा र त्यसबेलाका उटपट्याङ निकै सम्झिन्छु आज पनि ।’
अनि बुझे विभेद र असमानता
उनी जब क्याम्पस पढ्न थाले, तब उनलाई ज्ञात भयो कि हाम्रो समाज त साँच्चै विभेदकारी रहेछ, साँच्चै कठोर र अमानवीय रहेछ ।
माथि भनिएझैँ आफ्ना प्रिय बालसखाहरूलाई स्कुलतिरै छाडेर जब उनी उच्चशिक्षाका लागि अघि बढे, आफ्ना ती प्यारा साथीहरू तलै हराए । हात तानेर माथि ल्याउने अवस्था थिएन उनको । निकै दुःखी भए उनी यसबाट ।
आखिर उही चर्चित गीतको नियति भोगे आफ्ना प्यारा साथीहरूले- ‘सँगैको साथी हवाई जहाजमाथि, म भैँसी गोठालो ।’ यो गीत ती साथीहरूको अपमानका खातिर होइन, संवेदनाको साझाकरणका लागि सम्झिए विमलले । साँच्चै नै दुखेको रहेछ यसले विमलको मन, बारबार कुराकानीमा यही सन्दर्भ कोट्याइरहे उनले ।
राज्य सशक्त र संवेदनशील नहुनुको परिणाम उनका साथी जस्ता विपन्न आयका, सामाजिक, आर्थिक हिसाबले पछि परेका/पारिएकाहरूको अवस्था आज पनि लगभग उस्तै रहेको उनको भनाइ छ । यसै कारण राज्य आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकप्रति उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘कोही पनि नागरिक राज्यबाट प्राप्त हुनुपर्ने र राज्यले दिनुपर्ने सेवा, सुविधाबाट बञ्चित हुनुहुँदैन’, विमल भन्छन्, ‘यो राज्यको अहं दायित्व र महत्त्वपूर्ण सबाल पनि हो, यसमा राज्य चुक्नुहुँदैन ।’
विमलले विराटनगर वरगाछीमा रहेको गोग्राहा विद्यालयबाट प्राथमिक शिक्षा आर्जन गरे । त्यस विद्यालयमा ४ कक्षासम्म पढेपछि केही समय विराटनगरकै प्रसिद्ध विद्यालय, जुन विद्रोही कृष्णप्रसाद कोइरालाले स्थापना गरेका थिए, उक्त विद्यालयमा केही समय अध्ययन गरे । र, २०२५ सालमा १३ वर्षको उमेरमा जनता हाइस्कुलबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरे ।
एसएलसी उत्तीर्ण भएपछि उच्चशिक्षाका लागि उनी काठमाडौं आए । आईएस्सी त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट पूरा गरे । त्यहीबेला महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरमै बीएस्सी सुरु भयो । उनी घरबाटै धाउन सकिने भएकाले विराटनगर नै गए र २०३० सालमा बीएस्सी उत्तीर्ण गरे ।
यसपछि एमएस्सी पढ्न उनी पुनः काठमाडौं आए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरबाट २०३४ सालमा प्राणीशास्त्रमा स्नातकोत्तर पूरा गरे विमलले ।
उद्देश्य प्राध्यापन, प्रवेश निजामतीमा
उनको उद्देश्य प्राध्यापन थियो । पढाउने, अनुसन्धान गर्ने उनको इच्छा थियो । तर, उनी प्रवेश गरे निजामती सेवामा ।
भएछ के भने उनी हाजिरी जवाफमा निकै सशक्त रहेछन् । प्रायः हाजिरी जवाफको टोली नेता उनै हुनेरहेछन्, विद्यालय र कलेज तहमा समेत ।
यही कारण उनलाई साथीहरूले भनेछन्, ‘यति सशक्त सामान्य ज्ञान भएको तिमीले लोकसेवामा निश्चित नाम निकाल्छौ, परीक्षा देऊ ।’
नभन्दै एमएस्सी सक्नेवित्तिकै उनले लोकसेवा परीक्षा दिए, नाम निस्कियो । रुचि नहुँदानहुँदै पनि मुखमा आएको जागिर छाड्न उनलाई गाह्रो भयो ।
उनको वन मन्त्रालयमा पदस्थापन भयो । शाखा अधिकृतमा नाम निस्किएर जागिर खाइरहँदा पनि उनलाई प्राध्यापनको भुतले छाडेन ।
त्यहीबेला साहित्यकार मित्र अशेष मल्लको सल्लाहमा उनले नेपाली विषयमा बीए र एमए पनि पूरा गरे । साहित्यमा रुचि भएका कारण पनि उनले कम्तीमा साहित्य साधना गर्नेले भाषा, साहित्यबारे बुझ्नुपर्छ भन्ने ठानेर नेपाली विषय पढेको बताउँछन् ।
तर, नेपाली विषयको डिग्री उनको पेसागत जीवनमा काम थिएन । उनले नेपाली विषय पढ्दा अशेषकै नोट र पुस्तक पढेर पास गरेको बताउँछन् ।
उनी जागिरमा प्रवेश गरेको २ वर्ष भएको थियो । अमेरिकाको ड्युक विश्वविद्यालयले खुला छात्रवृत्ति आह्वान गर्‍यो । उनको नाम निस्कियो । उनी वातावरण व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर (एमएस) गर्न अमेरिका जाने भए ।
यहीबीच उनको विवाहको कुरो चल्दै थियो । तर, बाआमालाई पढिसकेर आएपछि विवाह गर्ने भनेर मनाएका थिए । बीचमा उनको प्रोसेस लम्बिएपछि उनी परिवारको दबाबमा विवाह गर्न बाध्य भए ।
दुलही फर्काउने दिन नै उनको कन्फर्मेसन आयो । ती दिन सम्झिन्छन् विमल, ‘भर्खर विवाह गरेकी श्रीमती छाडेर अमेरिका उड्नुपर्दा पक्कै नरमाइलो भयो ।’
उनी अमेरिका गएको ६ महिनापछि श्रीमतीलाई पनि सँगै लगे र अढाई वर्षपछि अध्ययन पूरा गरेर नेपाल फर्किए ।
उनको प्राध्यापनको नशा छुटेकै थिएन । नेपाल फर्किएपछि उनी काजमा वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा आगन्तुक प्राध्यापकका रूपमा पढाउन थाले । उनको अझै अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमै रुचि थियो ।
तर, त्यहाँ पनि राजनीति रहेछ भन्ने त्यसबेला थाहा पाए, जब उनका लागि विज्ञापन खुलाइएन । उनी निराश भए । आफ्नो इच्छा र रुचि एउटा, काम गर्नुपरेको छ अर्कै ।
त्यहीबेला लोकसेवाले परराष्ट्र र प्रशासनमा अन्तरसेवा प्रतियोगिता गराउने भयो उपसचिवका लागि । उनले परराष्ट्र र प्रशासन दुवैतिर नाम निकाले । तर, भविष्य प्रशासनमै देखेपछि उनी प्रशासनमा उपसचिव भए, २०४० सालमा ।
उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयमा पदस्थापन गरियो । केही समयपछि नै उनलाई स्थानीय विकास अधिकारी बनाएर बारा पठाइयो ।
तत्कालीन राजाले ३५ वर्षमुनिका उपसचिवलाई अनिवार्य प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) तालिम दिने नीति ल्याएका थिए । सोहीअनुसार उनले तालिम लिए र तालिममा उत्कृष्ट ठहरिए ।
यसपछि उनलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सीडीओ बनाएर पठाइयो । २ वर्ष त्यहांँ रहँदारहँदै २०४६ सालमा लोकसेवा आयोगले खुला प्रतिष्पर्धामार्फत् सहसचिव माग गर्‍यो ।
उनले खुलाबाट सहसचिवमा नाम निकाले र प्रथम श्रेणीको सीडीओ भएर केही समय जनकपुरमा रहे ।
उनले बहुदलपछिको पहिलो आमनिर्वाचन जनकपुरमा सम्पन्न गराए, २०४८ सालमा । त्यहीबेला उनले पुनः अमेरिकामा पब्लिक पोलिसी अध्ययन गर्ने अवसर पाए ।
पब्लिक पोलिसीभित्र पनि आर्थिक नीतिबारे अध्ययनका लागि उनी युनिभर्सिटी अफ टेक्सस अस्टिनतिर लागे । डेढ वर्ष अध्ययन गरेर उनी फर्किए ।
यसपछि मात्र उनलाई अब आफ्नो करियर निजामती सेवामै बिताउनुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस भयो ।
‘यो विषय मेरो कामसँग मिल्ने भयो । अब मात्र प्रशासनमा मेरो रुचि बढ्न थाल्यो’, विमल भन्छन् ।
उनी नेपाल फर्किएपछि उनको पदस्थापन उद्योग मन्त्रालयमा भयो । उनी उद्योग मन्त्रालयमा रहँदाका दिनलाई जीवनकै उर्वर समयका रूपमा लिन्छन् ।
‘६ वर्ष उद्योग मन्त्रालयमा रहँदा मैले जे गरेँ, त्यो सदा सर्वदा सम्झनयोग्य रह्यो’, विमल भन्छन्, ‘ऊर्जा व्यवस्थापन, औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण, औद्योगिक तथ्याङ्क प्रणाली, उत्पादकत्व परिषद् जस्ता काम मैले गर्व गर्न सक्ने काम थिए ।’
उसो त, उद्योग मन्त्रालयमा छँदा उनलाई देश, विदेश घुम्ने र त्यहाँका विकास र अन्य कुराहरू अध्ययन, अवलोकन गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो ।
यहीँ रहँदै उनले जर्मनीबाट विद्यावारिधि गर्ने अवसर पाए । जर्मनीको डोर्टन्युन युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधिको अवसर त पाए तर २ सेमेस्टर त्यहीँ बसेर पढ्नुपर्ने थियो । उनले त्यो समय पनि व्यवस्थापन गरे- २ वर्षमा एक-एक सेमेस्टर गरेर । शोधका कार्य नेपालमै बसेर गरे र विद्यावारिधि पूरा गरे ‘इण्डष्ट्रियल पोलिसी इम्प्याक्ट अन लोकेसन स्पेसिफिसिटी’ शीर्षकमा सन् १९९९ मा ।
२०५४ सालमा उनी अर्थ मन्त्रालयमा विशेष सचिव भएर गए । २ वर्षपछि अर्थ मन्त्रालयमै सचिव बने । उनी अर्थमा ५ वर्ष विशेष सचिव र सचिवका रूपमा रहे ।
उनको अनिवार्य अवकासको मिति नजिक थियो । २०५९ माघमा उनी अवकास हुँदै थिए । ७ असोज २०५९ मा उनलाई मुख्यसचिव बनाइयो । अब ३ वर्ष उनले निवृत्त हुनुपरेन ।
तर, उनी मुख्यसचिव भएको समय राजनीतिक रूपमा सहज भने थिएन । एकातिर जंगलबाट माओवादी आतङ्क मच्चाइरहेको थियो, देश र जनता त्राहीमाम थिए । अर्कातिर राजदरबार हत्याकाण्डपछि अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र राजगद्दीमा बसेका थिए । राजनीतिक दलहरूबीच एकता, सद्भाव र सहकार्य हराउँदै गएको थियो ।
त्यही मौकामा १८ असोज २०५९ मा अर्थात् विमल मुख्यसचिव बनेका ११ दिनमै राजा ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘अक्षम’ घोषणा गरेर बर्खास्त गरे ।
३ जना प्रधानमन्त्री र १ जना राजा भोग्दा
विमल भर्खर मुख्यसचिव भएका थिए । शेरबहादुर देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रले बर्खास्त गरे ।
उक्त प्रकरणबारे विमल सम्झिन्छन्, ‘निर्वाचन गराउनुपर्ने थियो, प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराउन नसक्ने भन्दै दरबारमा पत्र लेख्नुभयो । मैले सरकारले यसरी पत्र लेख्नु राम्रो होइन, निर्वाचन आयोगलाई बोल्न लगाऔँ यस विषयमा भनेँ तर प्रधानमन्त्री मान्नुभएन । अन्ततः उहाँलाई नै राजाले अक्षम भनेर हटाए ।’
उनलाई लाग्छ, उक्त पत्रलाई टेकेर नै राजाले आफ्नो हातमा शासन लिन सफल भएका हुन् ।
त्यसपछि राजाले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए अनि सूर्यबहादुर थापा हुँदै २ वर्षपछि पुनः शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाए ।
१९ माघ २०६१ मा राज्यको शासन सत्ता पूर्णतः आफ्नो कब्जामा लिए राजा ज्ञानेन्द्रले ।
यसबीचमा विमलले नेपालका सबैजसो नेता र राजाको समेत सङ्गत गरे, उनीहरूसँग प्रत्यक्ष काम गरे । भन्छन्, ‘मेरो कार्यकालमा सबै किसिमका सरकार र परिवेश भोगेँ । सबै खालका पात्र र चरित्र अनुभव गरेँ, नजिकबाट चिनेँ ।’
उक्त भोगाइले उनलाई राजनीतिको यथार्थ थाहा पाउन निकै मद्दत पुगेको बताउँछन् ।
तथापि, उनको ३ वर्षे मुख्यसचिव कार्यकाल निकै सङ्घर्षपूर्ण रहेको बताउँछन् । उनको कार्यकालमा धेरै पटक सङ्कट र अप्ठ्यारा आइपरेको उनको भनाइ छ । ‘यस्ता धेरै घटना भए, जसका कारण मलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने अवस्था आयो’, उनी भन्छन्, ‘तर, मैले टेरिनँ, हारिनँ ।’
खासगरी उनलाई राजनीतिक खुराफातका कारण पटक पटक समस्या परेको बताउँछन् । राजनीतिक हिसाबले हुने ‘इन्ट्रेस्ट’ र ‘इन्टेन्सन’को सिकार बन्नुपर्ने अवस्था आए पनि आफू अडानमा रहेकाले कसैले हल्लाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
विमल मुख्यसचिव हुनेवित्तिकै देउवालाई राजाले प्रधानमन्त्रीबाट हटाए । लोकेन्द्रबहादुर चन्द हुँदै सूर्उबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने । थापा प्रधानमन्त्री भएका बेला यस्तै एउटा घटना भयो । विमल उक्त घटना त्यसबेला नरमाइलो भए पनि अहिले सम्झिँदा रमाइलो ठान्छन् ।
प्रधानमन्त्री थापा प्रधानमन्त्री थिए । थापा विदेश भ्रमणमा गएका रहेछन् । त्यहीबेला बाबुराम ढकालले भ्रष्टाचारबारे पुस्तक लेखेछन् । विमललाई विमोचनका लागि बोलाएका रहेछन् ।
विमलले उक्त कार्यक्रममा नेपालको भ्रष्टाचारबारे केही कुरा भनेछन् । उक्त कार्यक्रमबारे कान्तिपुर दैनिकमा समाचार आएछ- ‘सरकार असफल’ शीर्षकमा ।
उक्त समाचार आएपछि सबैजसो मन्त्री निकै आक्रोशित बनेछन् र उनलाई हटाउन दबाब दिन थालेछन् ।
आफूले भने उक्त पत्रिका हेरैकै थिएनन् । के समाचार आएको छ भन्ने पनि उनलाई थाहा थिएन ।
प्रधानमन्त्री थापा स्वदेश फर्किनेवित्तिकै मन्त्रीहरूले अनेक कुरा लगाएछन् । थापाले तथ्य बुझ्न पत्रकार शम्भु श्रेष्ठलाई बोलाएछन् । कार्यक्रमका सभापति पत्रकार शम्भु श्रेष्ठ रहेछन् ।
शम्भुले यथार्थ बताइदिएपछि प्रधानमन्त्री थापा प्रस्ट भएछन् । भोलिपल्टको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा धेरैजसो मन्त्रीले ‘मुख्यसचिवले नैतिकताका आधारमा राजीनाममा दिनुपर्छ’ भनिरहेका रहेछन् । प्रधानमन्त्री थापाले त्यो सामान्य विषय भएकाले विषय स्थगित गर्न भनेपछि साम्य भएछ ।
वास्तवमा विमलले उक्त कार्यक्रममा भनेका कुरा यस्ता थिए :
‘हाम्रा सरकारहरू शासकीय प्रबन्धमा असफल भए । हामीसँगै विकासमा अगाडि बढेको कोरिया ४० गुणा र चीन ८ गुणा अगाडि छन् । हामी धेरै कमजोर अवस्थामा छौँ अझै । हाम्रो नेतृत्व फितलो भएकै हो ।’
देउवालाई अपदस्त गरेर राजाले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए । चन्दले दरबारकै सल्लाहमा निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेछन् । मन्त्रिपरिषद् बस्ने अघिल्लो दिन उनी अपिसमा अबेरसम्म बसेका रहेछन् ।
त्यसबेलाका सहसचिव, पछि मुख्यसचिव, सोमलाल सुवेदीले सुनाएछन्, ‘एउटा प्रस्ताव आएको छ भर्खर ।’
प्रस्ताव रहेछ उही निजामती सेवा ऐन संशोधनको । उनलाई पारो तातिहाल्यो । कारण, आफू मुख्यसचिव, आफैँलाई थाहा नदिई कुनै प्रस्ताव ल्याउन कसरी सम्भव भयो ? त्यसमाथि उक्त प्रस्ताव ल्याउने जिम्मेवार मन्त्रालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय थियो तर प्रस्ताव अन्तैबाट आएको थियो ।
उनले बुझिहाले कि यो मन्त्रिपरिषद्को बदमासी हो । यसपछि उनले जुक्ति लगाए- उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा नलैजाने वा रोक्ने ।
यसको कारण अर्को पनि थियो । उक्त संशोधन प्रस्तावमा निजामती कर्मचारीको भविष्य डामाडोल हुने अवस्था थियो ।
विमलका अनुसार उक्त प्रस्तावमा २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई कुनै कारण नखुलाई अवकास दिन सकिने व्यवस्था थियो । यसरी नै कुनै नजिामती कर्मचारीका बारे माओवादीसँग निकट भएको सूचना मात्र आए पनि उसलाई निवृत्तिभरणलगायतका कुनै पनि सुविधा नदिई अवकास दिन सकिने उल्लेख थियो ।
‘ओहो, त्यो त अत्यन्तै अमानवीय र घातक कुरो थियो’, विमल भन्छन्, ‘कुनै पनि कर्मचारीको जागिरको सुरक्षा थिएन ।’
यही भएर उनी उक्त प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा मन्त्रिपरिषदमा नलैजाने योजनामा पुगे ।
भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । सम्बन्धित मन्त्रीले ‘निजामती सेवा ऐन संशोधनको प्रस्ताव किन आएन ?’ भनेर सोधे । उनले दरबारदेखि प्रत्रानमन्त्रीसम्मको सल्लाहमा उक्त प्रस्ताव आएको बताए । विमलले भने, ‘म मेरै मृत्युपत्रमा दस्तखत गर्न सक्दिनँ ।’
उनी भन्छन्, ‘एउटा सामान्य राजनीतिक आस्थाका कारण वा राजनीतिक आक्षेपका कारण कसैको पनि जागिर धरापमा पर्नुहुँदैन भनेर निकै रिसाएँ ।’
उनले तत्कालीन दरबारका सचिवसँग पनि यस विषयमा असहमति जनाए । अन्त्यमा उक्त प्रस्ताव रोकियो । आमनिजामती कर्मचारी ठूलो जोखिमबाट बचे ।
उक्त घटना सम्झिँदा उनी अझै पुलकित बन्छन् । कारण, आफू जस्तै हजारौँ कर्मचारीको रोजीरोटीको बाटो बन्द भएन त्यही आफ्नो अडानका कारण ।
उनी ७ असोज २०६२ मा सेवा निवृत्त भए । सेवा निवृत्त भएको दिन उनको जीवनको अर्को खुसीको दिन भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘झन्डै ३ दशक कति धेरै र ठूला बोझ बोकिएछ ! जागिरबाट अवकास भएको दिन टाउको निकै हलुङ्गो भयो, शरीर भुवा जस्तो हलुका ।’
राजाले भने, ‘अब के गर्छौ ?’
सेवा निवृत्त हुनेबेला राजा ज्ञानेन्द्रले बोलाएर भनेछन्, ‘अब के गर्छौ ?’
विमलका अनुसार यसरी राजाले बोलाएर सोध्नु भनेको मसँग केही माग, म केही दिन चाहन्छु भनेको हो ।
अथवा राजाले विमललाई अवकासपछि पनि कुनै जिम्मेवारी दिने सङ्केत गरेका थिए । तर, विमलले आफ्नो स्वाभिमान जनाए- ‘सरकार ! म यतिन्जेल सरकारी सेवामा रहेँ । जे जति गरेँ, इमानले गरेँ । म आफ्नै बुताले र क्षमताले यहाँ पुगेको हुँ र अब पनि आफ्नै ढंगले बाँच्नेछु ।’
सेवा निवृत्तपछिको जीवन
२०६२ सालमा सेवानिवृत्त भएपछि पनि विमल व्यस्त नै रहे । तत्कालीन राजाको ‘आशीर्वाद’ वा कतै नियुक्ति खाने अप्रत्यक्ष प्रस्ताव अस्वीकार गरेका उनले निवृत्त भएलगत्तै विश्व बैंकमा सल्लाहकारका रूपमा केही समय काम गरे । अमेरिकाको वासिङ्टन बसेर उनले ६ महिना विश्व बैंकमा काम गरे । यसपछि एसियाली विकास बैंक प्रतिष्ठानमा जापान गएर भिजिटिङ प्रोफेसरका रूपमा काम गरे ।
यसरी उनले गत वर्षको दशैँसम्म विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी राष्ट्रिय र अनतर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गरे ।
विमल कोइरालाको परिचय मुलुकको कर्मचारीतन्त्रभित्र सीमित छैन । उनी कुशल कवि र गीतकारसमेत हुन् । उनी कथा पनि लेख्छन् ।
विक्रमको २०३० को दशकबाटै साहित्ययात्रा सुरु गरेका विमल विशेषगरी अशेष मल्ल र महेश प्रसाईंको सङ्गतले साहित्यमा सक्रिय रहेको बताउँछन् ।
विराटनगरमा बीएस्सी पढ्दै गर्दा आफूभन्दा एक व्याच जुनियर भएर अशेष र महेश आए । उनीहरूसँगको उठबस र सङ्गतले विमलमा रहेको सुषुप्त साहित्यचेत जागृत भयो ।
विराटनगरमा हुने हरेकजसो साहित्यिक कार्यक्रम, विशेषगरी कविगोष्ठीमा उनीहरूको सहभागिता टुट्दैनथ्यो । त्यसैबेला ‘रूपरेखा’ पत्रिकामा उनको अन्तर्वार्ता छापियो ।
भन्छन्, ‘कवि ईश्वरबल्लभले लिनुभएको ६-७ पेजको मेरो अन्तर्वार्ता छापिएपछि मलाई स्थापित हुन सहज भयो ।’
उनको साहित्य लेखन २०३० देखि २०४३ सालसम्म निकै तीव्र भएको बताउँछन् । त्यसपछि भने जागिरका कारण बढी व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले साहित्यमा कम समय दिएको उनको भनाइ छ ।
उनी आफ्ना कवितामा विद्रोह र सामाजिक, राजनीतिक विकृतिप्रति व्यंग्य गर्न रुचाउँछन् । यसै कारण उनको जागिरको स्वभाव र लेखनको विषयबीच विरोधाभाष भयो । सरकारी जागिरे विमल, त्यसमाथि निर्दलीय पञ्चायतकाल । लेख्नुपर्नेचाहिँ विद्रोही कविता । स्वाभाविक हो, समस्या हुन्थ्यो नै । जागिर बचाउने कि साहित्यकार बन्ने भन्ने दोधार ।
तथापि, उनले जागिरकै क्रममा २०३६ सालमा, जब देशमा जनमतसङ्ग्रहको माहोल बन्दै थियो, त्यसबेला नै ‘सडक कविता क्रान्ति’मा सहभागिता जनाए । राजा वीरेन्द्रले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ जनतालाई भने पनि अन्ततः जनमतसङ्ग्रहमा पञ्चायतलाई नै विजयी गराइएको थियो । ‘सुधारिएको पञ्चायत’ नामको शासन प्रणालीका बेला विमलले कविता लेखेकै कारण अनेकौँ पटक प्रष्टीकरण दिनुपरेको सुनाउँछन् ।
उनले २०४३ सालमै पहिलो कविताकृति ‘मौन शिविरबाट’ प्रकाशन गरेका थिए । यसपछि उनको लेखनी अत्यन्त पातलियो । एकै पटक २०५६ सालमा आएर मात्र दोस्रो कविताकृति ‘उत्सव मनाउने तयारीमा’ प्रकाशन भयो । २०६३ सालमा ‘विमल कोइरालाका कविता र वार्ता’ प्रकाशन भयो भने २०६५ सालमा ‘विमल कोइरालाका कविता र गीतहरू’ प्रकाशन भयो । उनको अंग्रेजी भाषामा ‘स्लोगान ! यस, आई राइट स्लोगान’ कविताकृति पनि प्रकाशित छ ।
उनीमाथि केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तिले लेखेको ‘निजामती सेवामा विमल कोइरालाका २७ वर्ष’ पुस्तक प्रकाशन भएको छ भने २ जनाले स्नातकोत्तर तहको शोध उनीमाथि गरेका छन् ।
उनले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल र पत्रपत्रिकामा दर्जनौँ अनुसन्धानमूलक लेख लेखेका छन् ।
विमल कविता र कथा लेखनमा त रमाइरहेकै थिए । गीत लेखनमा सुस्त नै थिए । २०६० सालतिर सङ्गीतकार शक्तिबल्लभले सङ्गीत गर्छु, गीत लेखिदिनुहोस् भनेपछि उनले शक्तिबल्लभका लागि गीत लेखे । शक्तिबल्लभकै सङ्गीतमा उनका २ वटा गीति एल्बम आए- ‘प्रस्ताव’ र ‘मायै पियारो’, २०६० र २०६२ सालमा । अन्य गीतकारसँग मिलेर संयुक्त एल्बम पनि निकाले उनले ।
विमलले केही नेपाली चलचित्रमा समेत गीत लेखेका छन् । उनले ‘हतियार’, ‘ग्याम्लर’लगायत आधा दर्जन चलचित्रमा गीत लेखेका छन् ।
यद्यपि, आफू गीतबाट त्यति सन्तुष्ट नभएको उनको भनाइ छ । ‘कविता र निबन्धमै बढी सन्तुष्टि मिल्ने रहेछ’, विमल भन्छन् । तर, उनका निबन्ध अर्थ-राजनीतिसँग बढी सम्बन्धित भएकाले ती निबन्धमा ‘साहित्यिकता’ कम भएको हो कि भन्ने लाग्छ रे !
विमल अब कथासङ्ग्रह र एउटा कवितासङ्ग्रह प्रकाशनको तयारीमा छन् । उनी महिनामा एउटा विदेशी राम्रो पुस्तक र एउटा नेपाली साहित्यको गतिलो पुस्तक पढ्ने योजनामा छन् । तर, गत मंसिरयता बजारमा आएका धेरैजसो आख्यानका पुस्तक भने पढिसकेको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, १३ असार २०७७, ०३:४८:००
महेश पौड्यालसँग साहित्यिक भलाकुसारी गर्दै छोटा मीठा कविता